Messages dhoofinta Text ka Android inay computer u kaabta.
SMS! Marka waxaa hore abuurtay, waxa ay inaga soo bandhigay dunida cusub. Oo dunida cusub, saaxiibada iyo culaysyo xusuus wanaagsan in aan sameeyo. Laakiin ma aysan macnaheedu waxa keliya oo aanu u isticmaalaa in aan waqti fiican ku qaataan. Mararka qaarkood waxaa la xiriira shaqo iyo aqoon badan oo aad u qaali laga yaabaa in aan sidoo kale illoobin ama tirtirto, aad ku kaydsan ee telefoonada naga Android. Waxaan qabaa macluumaad kuwa ay nabdoon yihiin meesha ay joogaan. Sidee runta ah waa in? Maxaa dhacaya haddii aad tirtirto fariin gaar ah, taas oo ah mid aad u muhiim ah in aad? Shaqsi ahaan waxaan heli fariimo badan oo oo markii u baahanahay in aan in ay helaan fariin gaar ah, waxaan halgan ee u helo. Si farxad leh waxaa jira hab lagu tan looga hortago ka dhacaya oo soo bixi fariimaha qoraalka ah ka android, iyo in marka WonderShare MobileGo yimaado anfacaya.
Sidaas darteed haddii shaashadda aad telefoonka ee waa jabay iyo aad qabto fariimaha qoraalka ah aad qabto in ay helaan, waxaa loo baahan yahay in argagixin ku saabsan laga badiyay fariimaha qoraalka ah oo dhan! Waxaad ka android soo bixi kartaa fariimaha qoraalka ah. Continue reading on this article si aad u ogaato sida loo kala soo bixi fariimaha qoraalka ah ka android adigoo isticmaalaya Wondershare MobileGo. Maanta, waxaan la muujinaya doonaa sida aad u raad raac fariimaha qoraalka ah oo dhan oo ay helaan iyaga mar kasta oo aad rabto, in aad kombuutarka.
Qaybta 1aad: Sida loo dhoofiyo fariimaha qoraalka ka Android inay PC:
Qeybta 2: Sida loo Isticmaalo Wondershare MobileGo in ay dajiyaan SMS:
Qeybta 3: Wondershare MobileGo iyo Download
Qaybta 1aad: Sida loo soo bixi fariimaha qoraalka ka Android inay PC:
Wondershare MobileGo waa software weyn soo saartay Shirkadda Wondershare. MobileGo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu awood badan ee noociisa ah u gaar ah. Iyada oo fudud oo user dusha saaxiibtinimo. Waxay kaa caawinaysaa in aad maamusho oo dhan kiniiniga iyo telefoonada aad ku shaqeeya Android ay la kaliya hal software. Iyada oo taageero ka software this, aad dhoofin karaan farriimaha qoraalka ah ka Android in aad PC kaliya hal click. Taasi ma ahayn dhamaadka! Waxaad sameyn kartaa in aad xiriirka la leedahay raad raac, Apps, abuse wac, music, videos, sawiro iyo xataa jadwalka. Maqaallo WonderShare MobileGo ayaa:
gurmad -Can iyo soo celinta fariimaha qoraalka ah lagu kaydiyaa oo dhan
fariimaha qoraalka ah -Download ka Android
- badbaadi fariimaha qoraalka ah ka android sida ... (XML iyo txt)
- iyo qaar badan.
Ka hor inta aanan bilaabin tutorial ah, waxaa jira waxyaabo qaar aan u baahanahay in la fahmo. Marka aad furto software iyo xirmaan telefoonka, software lagu ogaan doonaa telefoonka iyo aad u muujinaysa sawir u ah. Sida aad arki karto, software ka mid ah 3 qaybood oo kala duwan, My Device, Super Qalabka iyo Download.
Hadda waa maxay kuwanu?
My Device : Tani waa bogga ugu weyn ee MobileGo. Waa meesha aad maamuli kartaa wax walba oo aad telefoonka, aad SMS, Music, barnaamijyadooda, video iyo document files.
Qalabka Super : Qalabkani waxa uu u kala qaybiyey 3 qaybood oo laftiisa. Kuwani waa Advanced, Muhiimka ah iyo Management Media.
Sare : Wixii Android, waxay bixisaa 4 hawlaha waxtar leh. Tirtire Data, One Root Click, Data Recovery iyo Transfer Phone. Muhiimka ah : qayb waxay bixinaysaa qaababka waaweyn ee ay dhawaan loo isticmaalo.
Maamulka Media : Halkan waxa aad ka soo dhoofsadaan kartaa video music iyo in qalab aad. Bishaaradayda waa, kaliya ee Android users, waxa ku siinayaa awood u leh inay u dhoofiyaan music iyo video ka qalab Android aad si aad PC.
Tani waa meesha aad sida fiican u soo bixi kartaa music, video, codsiyada ka dhiseen in Google Play, MP3 download, YouTube iyo wax kasta oo goobta ku daray.
Hadda oo aan ognahay in waxyaabaha aasaasiga ah ee software this, waxa la joogaa wakhtigii si ay u helaan aqoonta sida aan ka Android dhoofin karo SMS.
Ka hor inta aanan bilaabin tutorial ah, aynu loo hubiyo in aan Ma doonayo inaan wax dhibaato ah la isku xira qalab Android aad si aad PC . Waayo, hubi in aad debugging USB karti on qalab aad. Tilmaamaha Full ayaa la siiyay markii ugu horeysay ee aad furto Wondershare MobileGo. Haddii aadan haysan cable ka shaqeeya USB ama dekedda USB shaqeeya, waxaa jira wax ay ka wel ku saabsan ka. Software waxay bixisaa xiriir ka badan Wi-Fi sidoo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la raaco tilmaamaha la bixiyay ee software. MobileGo Qadada, xiro qalabka aad iyo fadlan Samirna inta qalab aad si buuxda ku xiran.
Marka la xidhiidha si buuxda loo sameeyey, waa in aad arki qalab aad suuqa kala My Device.
Under magaca qalab ee bar bidix, guji SMS iyo samir halka software la loading fariimaha qoraalka ah ee aad.
Marka uu furmo suuqa waxaa ku raran yihiin, waa in aad arki karin fariimaha qoraalka ah oo dhan u noqon.
Si ay u doortaan wada hadal kaliya hal inay u dhoofiyaan, guji wadahadalka laftiisa. Haddii aad rabto in ay doortaan wada hadalka ku tarmeen, oo aad u baahan tahay inaad guji sanduuqyada wada hadal kasta oo ayan ku jirin.
Marka aad samaysay xulashada wada hadalka si ay u dhoofiyaan, riix dhoofinta button in bar sare.
Dooro meesha iyo magaca faylka aad rabto in lagu badbaadiyo.
Sug ilaa dhoofinta la dhammeeyo. Riix Open Folder ama Ok si ay u dhamaystiraan dhoofinta.
Si ay u dajiyaan fariimaha qoraalka ah si aad qalab Android ka PC, fadlan raac tilmaamaha ku saabsan sida loo dhoofin SMS si aad PC ilaa aad tallaabo 4 gaari:
5- Click on Import. (Marxaladdan, aadan haysan in ay doortaan wax).
6- software ayaa ku weydiin doonaa inaad beddesho app fariimaha in Default, sida hoos ku qoran. Tubada on Ok on qalab aad marka hore, ka dibna waxaa loo xaqiijiyo in aad kombuutarka.
7- Dooro file ah oo aad dooneyso in aad soo dhoofsadaan, marka aad samaysay doorashada faylka (s), guji Open .
8- Fadlan Samirna inta dejinta la dhamaystiro.
9- Waad soo degida samaysay fariimaha qoraalka ah. Hadda software ah ku weydiin doonaa inaad xaqiijin suuqa kala pop-up kale.
Ha barkinta qalab aad ka PC oo aan maahan. Tani waxay keeni kartaa dhibaatooyin. Si aad u tuurid telefoonka, guji 'maqan Leyliga', xaq guji MobileGo icon, oo tuurid.
> Resource > masixi > Messages dhoofinta Text ka Android inay computer ah ee kaabta